Onye nrụpụta ihe nrụpụta ZL kacha mma na ụlọ nrụpụta | Keyuan
Igwe a bụ trolley ọka a na -ebugharị ebugharị.
Ihe dị n'ime ihe na -enye ihe, ihe nrụpụta igwe niile na -eji agagharị agagharị, ihe mmịpụta ihe agụba na efere orifice, site na ngwakọta nke mgbali extrusion na ike ịkwa akpacha ajị, na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ gbochie ihe na -atụgharị n'ime nha dị iche iche, irighiri ihe nwere ike ịdị mfe site na granulator efere sieve, anaghị agbajikwa, nnukwu irighiri ihe dị n'ime igwe pelleting ka na -egwepịa n'ime obere irighiri ihe. Mezue akụkụ gbara gburugburu nke ọnụọgụ grid chọrọ ebe a. Enwere ike iji akụrụngwa a jikọtara ya na granulator akọrọ, enwere ike iji ya mee ihe megidere ihe ma ọ bụ ụdị kristal buru ibu nke ihe ahụ, ka ihe ndị a wee bụrụ ezigbo ihe.
Ngwa a ga -agbagọ agbagọ, agbagọ agbagọ, na slicedinto granules iji mepụta irighiri ihe na -adịghị agbanwe agbanwe nke nwere oke nha yana mkpa njupụta. Enwere ike iji ya na ụlọ ọgwụ, nri, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Mgbe ihe ahụ batara na granulator, n'okpuru mwepu mma mma, obere irighiri ihe nwere ike gabiga ngwa ngwa site na sieveplate nke granulator, agaghịzi agbaji, na nnukwu ahụ na -aga n'ihu na -egwepịa n'ime obere irighiri ihe na granulator. ọnụ ọgụgụ meshes achọrọ agwụla.
Usoro nhazi ntụ ntụ nwere obere okpomọkụ, obere uzuzu na urughuru nke ugbo ala niile bụ nke igwe anaghị agba nchara 304.Meet chọrọ GMP.
A na-eji usoro igirigi dị n'agbata beri na ime ụlọ iji gbochie uzuzu ịbanye na mbibi na mbibi.N'otu oge ahụ, ọ na-egbochikwa akara mmanụ nke akara mmanụ na-eburu abata n'ime ụlọ ọrụ na-ebute mmetọ ihe.
Enwere ike idozi ọsọ rotor site na 30-145r/min.
Enwere ike ime anya site na mwepụ ala ruo na ala dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị ma nwee ike izute ihe ndị ahịa chọrọ.
Nwepụta nke granulator ahụ niile dị n'ụdị nhicha na ịtọpụ ihe nke ukwuu.
Efere ụdị sieve na -eme ka ọ dị mfe iji dochie sieveplates nke nkọwa dị iche iche.
Nke gara aga: Gzl260 akọrọ granulator
Osote: Ofu ihe na -ebuli igwe